साउन महिनामा जन्मेका महिलाको स्वभाव यस्तो हुन्छ – आफ्नो समाचार
साउन महिनामा जन्मेका महिलाको स्वभाव यस्तो हुन्छ
Afno News — २ श्रावण २०७५, बुधबार १९:३२0comment
काठमाडौँ – अझैपनि लाखौं मान्छे ज्योतिषशास्त्रलाई आधार मानेर आफ्ना कामहरु अगाडी बढाउछन् । मान्छेको जीवनमा ज्योतिषशास्त्रको दृष्टिले उ जन्मेको महिनाले पनि धेरै फरक पार्ने गर्छ । सोही अनुसार साउन महिनामा जन्मेका स्वभाबलाई बर्णन गर्दा यो महिनामा जन्मेका महिलाहरुले प्राय राम्रो र धार्मिक काममा बढी मन लगाउँछन् ।
यसो त साउन महिनालाई पवित्र र शुभ महिना मानिन्छ । साउन महिनामा जन्मिएका विशेषगरी यो महिनामा जन्मिएका नारीहरु सहयोगी भावनाका हुन्छन । उनीहरूको जीवनमा समान रुपमा सुख, दुःख, फाइदा र नोक्सान हुने देखिन्छ । यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरू राम्रो र धार्मिक काममा बढी मन लगाउँछन् ।
उनीहरूको जीवनमा समान रुपमा सुख, दुःख, फाइदा र नोक्सान हुने देखिन्छ । यी महिलाहरूले सन्तानबाट सुख प्राप्त गर्छन् । यी महिलाहरू अधिकांस समय कुनै न कुनै बिमारीबाट घेरिरहेका हुन्छन् । यस्ता महिलाहरू श्रीमान तथा प्रेमीबाट अधिक प्रेमको आशा राख्ने गर्दछन् ।
‘समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार पर्यटन’
हाकिमको २० % तलब काटिँदा जवानको भने २८ % काटिन्छ !
कसरी पाउने शारीरिक सम्वन्धबाट उच्चतम सन्तुष्टी ?
नेपाल यूएईबीच निर्णायक खेल आज, नेपालले सिरीज जित्न सक्ने तीन आधार